Tsy fandriampahalemana… vahana ifotony | NewsMada
Tsy fandriampahalemana… vahana ifotony
Fidangan’ny vidim-piainana, tsy fandriampahalemana etsy sy eroa, fanahiana ny fampianarana noho ny fihanaky ny valanaretina Covid-19… Izany ny olana atrehin’ny vahoaka ifotony amin’izao. Any ambanivohitra, manampy trotraka ny faharatsian’ny lalana amin’ny faritra sasany, ohatra: manahirana ny famoahana vokatra, zary ambany vidy. Maika avokoa izany? Na zava-dehibe…
Na izany aza, tena mampikaikaika ny maro eny ifotony ny tsy fandriampahalemana. Tanàna tsy ilaozana adala? Na misy hatrany ny tsy tan-dalàna amin’ny fanaovan-dratsy… Saingy mila hampitam-bava sy hampiteny ny moana ny asa ratsy etsy sy eroa amin’izao; eny, na toa mihavitsy aza: mihamahery vaika sy miharo habibiana izany, zava-tsy inona dia mety amoizana aina… Nahoana?
Fahantrana lalina no anisan’ny antony sy fototry ny asa ratsy sy fandikan-dalàna? Eny, na eo aza ny fitia te hanan-karena tampoka amin’ny sasany: misy koa ny manao izay hitazonana aina fotsiny. Rehefa tsy maty dia izay? Izay no mahabe ny hala-boty na hala-botry amin’ny zava-tsy inona. Tonga hatramin’ny hoe mety hamoizana aina na ny vola zato ariary, na arivo ariary, na iray alina ariary…
Na ahoana na ahoana, mila jerena ifotony izay fiainam-bahoaka izay. Raha ny vola, ohatra, no fototry ny ratsy rehetra, mety ho ratsy na ahina hanoatra lavitra no ho izany ny fiainam-bahoaka avela amin’izao? Misy ny azo leferina na iaretana sy iforetana, fa ny hanoanana mahazaka maniraka ny sasany hanaotao foana. Tsia, tsy manome rariny izay noana hahita rirany amin’ny asa ratsy izany.
Rehefa lalàna dia lalàna: tsy anavahana na iza na iza, na aiza na aiza, na rahoviana na rahoviana… Saingy mila jerena ny fiainam-bahoaka, raha tiana ny tena hisian’ny fampandrosoana. Na inona na inona atao, ho an’ny olona. Mba ny olona manontolo sy ny olona rehetra? Izay no antom-pisiana sy iasan’ny fitondram-panjakana. Mby aiza izany amin’izay (h)atao?
Misy ny azo atao, ny azo sorohina, ny azo ifanatrehana…Toy izay hitsabo na handamina izay mety ho fahavoazana na fikorontanana? Aleo vahana ifotony ny raharaha…